मुना हत्यापछि आत्महत्या प्रकरण : नसुल्झेको एउटै प्रश्न, ‘किन मारे त ?’ कामदारको यस्तो - हाम्रो देश
मुना हत्यापछि आत्महत्या प्रकरण : नसुल्झेको एउटै प्रश्न, ‘किन मारे त ?’ कामदारको यस्तो
काठमाडौं । प्लाष्टिकको पिर्काले टाउकोमा बजार्दै नाईलनको डोरीले घाँटी कसी क्षतविक्षत हुने गरी कुटपिटपछि रगतमा लत्पतिएको अवस्थामा आफ्नै निवासमा भेटिएकी पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्कीकी श्रीमती मुना कार्की हत्या र सोही घरमा विगत ६ वर्षदेखि कामदारको रुपमा बसेका वर्ष २२ का विजय चौधरीको आत्महत्या प्रकरणमा मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले तीनजनासँग बयान लिइसकेको छ । यद्यपी सबैको मनमा उब्जिएको प्रश्न हत्या किन भयो ? भन्ने विषय भने अझै अनुत्तरीत नै छ । कामदार झुण्डिएको अवस्थामा भेटिनु र मुना पनि टाउकोमा चोट र नील डामसहित अचेत अवस्थामा भेटिएर मृत्यु हुनुले यो घटना निकै शंकास्पद भएको र एउटा संगठित हत्या हुनसक्ने आशंका प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट गरिएको थियो । तर पछि सिसिटिभी फुटेज केलाएको प्रहरीको यो शंका भिडियोमा देखिएका भयावह दृश्यले दुर गर्यो ।
अर्थात् मुनाको हत्या उनैका कामदार विजय चौधरीले गरेको देखियो । तर फेरि अर्को शंका थियो प्रहरीसँग । घटनामा त्यो आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको डोरी चुडिएको र उ पनि मृत अवस्थामा थियो । त्यसमाथि सिसिटिभी फुटेजमा चौधरीको आत्महत्या देखिएन । सिसिटिभी फुटेजपछि प्रहरीले आफन्त छिमेकीसँग बयान लिएको थियो । अहिले प्रहरीले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले अनुसन्धानको लागि कार्की निवासकी महिला कामदार, ड्राइभर र प्लम्बरसँग बयान लिएको छ ।
अनुसन्धान अधिकारीले यस घटनाको सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउनको लागी भन्दै उनीहरुलाई छुट्टाछुट्टै प्रश्न सोधेको थियो । यसैबिच पूवैसचिव कार्कीको घरमा काम गर्ने ड्राइभर र प्लम्बरले हत्यामा संलग्न विजय चौधरीको आनिबानीबारे खासै जानकार नरहेको बयान प्रहरीसामू दिएका छन् । त्यस्तै घटना भएको दिन पूर्वसचिवका छोरालाई स्कुल पुर्याउन गएकी भनिएकी बिहान बेलुका पार्टटाईम काम गर्ने महिला कामदारले फरक बयान दिएकी छिन् । उनले बयानमा भनेकी छिन् । हो, विजय निकै रिसाहा स्वभावका थिए । महिला कामदारले भनेकी छिन् उ म काम गर्न जाँदा पनि झर्कन्थ्यो । रिसाउँथ्यो । आफ्नी घरमालिक अर्थात् मृतक मुना कार्कीले विजय रिसाहा स्वभावको भएको भन्दै उसँग विवाद नगर्न आफूलाई भन्ने गरेको समेत उनले बयान दिएकी छिन् ।
अनुसन्धानका लागि प्रहरीको अर्को प्रश्न घरधनीको आनीबानी थियो । ति तीनै जनाले मृतक मुना कार्की अर्थात् आफूहरुको घरबेटी असल हुनुहुन्थ्यो भन्ने आशयको बयान दिएका छन् । ‘उनीहरूले प्रहरीसँग भनेका छन्, कार्कीको आनिबानी राम्रो थियो । हामीलाई उतिसारो कराउने गाली गर्ने गर्नुहुन्नथ्यो । उहाँको स्वभाव ‘कामदारलाई माया गर्ने खाले थियो भनेका छन् ।’ तर अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी भन्छन्, तीनजनाको बयान सकिए पनि अन्य व्यक्तिसँग बयान लिने क्रम जारी छ । यस घटनाबारे मिहिन ढंगले अनुसन्धान हुँदैछ । अनुसन्धान पछि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछौँ ।
अहिले प्रहरीले घटना नियोजित थियो या हत्या र आत्महत्या हो भन्ने विषयलाई लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटनाको कारण पत्ता लगाएर यदि हत्या नै हो भने यो रिसइबीको कारण के थियो भनेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले हत्या भएकी कार्की र हत्यापछि आत्महत्या गरेका चौधरी दुवैको मोबाइल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ । अनुसन्धानमा रहेका प्रहरी अधिकारीका अनुसार कार्की परिवारको फोन डिटेल्सको पनि सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको छ । ‘घटना संवेदनशील भएकाले विविध कोणबाट अध्ययन हुनु जरुरी छ । त्यसैले, घटनाअघि र घटनापछि घटनास्थल क्षेत्रमा एक्टिभ भएका फोन र एप्सहरूको अध्ययन भइरहेको छ । कल डिटेल्सको पनि अध्ययन भइरहेको छ,’ परिसर प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले भने, ‘डिलेट गरिएका कल, म्यासेज, भ्वाइस रेकर्डलगायत फरेन्सिक ल्याबमा रिकभर हुन्छ । अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्था छैन ।’ तर फरेन्सिक ल्याबबाट डिलेट गरिएका कल म्यासेज पनि बाहिरिने हुँदा सत्यतथ्य थाहा हुनेछ ।
दुवै परिवारले शव बुझे
दुवै मृतकको शव परिवारले बुझेका छन् । बुधबार कार्की र चौधरी परिवारले शव बुझेको प्रहरीले जनाएको छ । खै के भन्ने म त बेहोसमा छु । एउटा अँध्यारो कोठा जस्तो देखियो। उसले गरेको हो कि होइन केही भन्न सकिनँ। आफ्नो छोरा विजयले पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको हत्या गरेको सिसिटिभी फुटेज हेरेर निस्किएपछि सञ्चारकर्मीलाई उनले दिएको प्रतिक्रिया हो यो ।
बुधबार मध्याह्न महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर पुगेका थिए उनी। प्रहरीले अहिले घटनामा हत्या गरी आत्महतया गर्नुको मोटिभ अर्थात् नियत के थियो भन्नेबारेमा खोजीरहेको छ । राम्रो घर र पछि राम्रो ठाउँमा जागिर लगाइदिन्छ। पठाइदेउ। भनेर अश्विन चौधरीको सुझावलाई मानेर छोरा विजयलाई काठमाडौं पठाएका थिए जानकीले । घरको अवस्था ज्यादै दयनीय भएका कारण छोराको पालनपोषण पनि हुने २ /४ रुपैयाँ पनि कमाई हुने भनेका कारण उनी श्रीमतीले शंका व्यक्त गर्दा पनि छोरालाई कलिलै उमेरमा काममा पठाउन बाध्य भएका रहेछन् ।
दाङको लमही नगरपालिका २ रनियापुरबाट काठमाडौं आएका विजय उनकै बुबाको भाषामा लजालु थिए । खासै बोल्दैनथे । झगडा पनि गर्दैनथे । मानिसहरुसँग कमै बोल्ने बानी भएको मानिसले कसरी अरुको हत्या गर्न सक्ला भनेर उनी अचम्मित छन् यतिबेला । अझ उनका छिमेकीले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै भनेका छन् विजय तयस्तो केटो छँदै थिएन । कतै घरमा काम गर्दा गाली खाएकाले त्यसकै रिसले हत्या त गरेका होइनन् ? यो आशंका चाहिँ उनको मनमा छ । मृतक विजयको घरमा दुईजना साना भाइ, आमा र बुबा छन् ।
घटना भएको राति ८ बजे मोबाईल फोनमा खबर आयो छोरोले आत्महत्या गर्यो। उनलाई त्यतिमात्रै भनिएको थियो । आफ्नो छोराले यसरी मान्छे पनि मार्न सक्छ भनेर त कल्पना नै गरिएको थिएन । मृतक विजयका बुबाले खबर पाएपछि आफूलाई वेचैनी भएको छ भरोरात सुत्न नसकेको बताए ।
साथीभाइसँग पनि झगडा नगर्ने मान्छे हो उ, उनी थप्छन्, पाँच महिना अघिमात्रै पाठेघरको शल्यक्रिया गर्न काठमाडौं आएकी विरामी आमाको विजयले नै उपचार गराएको। काठमाडौं मेडिकल कलेजमा श्रीमतीको उपचारका लागि आएका जानकीलाई पूर्व सचिव कार्कीले ५० हजार रुपैयाँसमेत दिएका थिए। तर पछिल्लो समय उनले घरमा पैसा नपठाएको भन्दै उनको परिवारले एक दैनिक पत्रिकासँग दुखेसो पोखेका थिए ।
जानकी संझिन खोज्छन् विजयको सात दिनअघि फोन गरेको थियो । त्यो नै अन्तिम कुराकानी हुन पुग्यो । त्यस दिन उनले घरबाट तेल र दाल मगाएका थिए । पाँच किलो भुटेको तोरीको तेल र मुसुरोको दाल पठाइदिनु भनेका रहेछन् विजयले । आफूलाई मेडमले नै तोरीको तेल र मुसुरोको दाल मगाउन भनेकी रहिछिन्। तेल र दालको जोहो गर्दै थिए जानकी अचानक फोनमा सुने छोराले आत्महत्या गरेको कुरा । काम गर्न गारो अप्ठेरो छ कि भनेर उनकी आमा सोध्थीन् । विजय जवाफ दिन्थे छैन । खासै ।
पूर्वसचिव कार्की , विजयका परिवार र उनका छिमेकी यस विषयलाई मान्न तयार नभएतापनि यी यस्ता घटना तत्कालको आवेग र रिसमा हुने बताउँछन् मनोविद् ।
कुनै रिस र इगो मनमा गढेर बसेको भए त यो एक्स्ट्रिम रुपमा ब्लास्ट हुन्छ । अतिशय संशय पिडकलाई भए वा भाग्ने प्रयासबाट पनि बच्न सक्दिन वा समाचारमा सुनेजस्तो हत्या हुनसक्छ भन्ने ठानेको मष्तिष्कले आफूलाई पनि मार्छ । हत्यापछि एक किसीमको प्रश्चाताप प्रायश्चित भएतापनि समय घर्किसकेको र आफूले गराएको विभत्स दृश्यबाट बाहिरीन नसकेर मानिसले आत्महत्या गर्छ ।
तर, कार्की प्रकरणमा फरेन्सिक रिपोर्ट आउँदै भएकोले यसै भन्न सकिन्न ।
घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न जाहेरी
निर्मम तरीकाले हत्या गरिएकी मृतक मुना कार्कीका श्रीमान् पूर्वसचिव अर्जुन कार्की र मुनाको हत्यापछि आत्महत्या गरेका भनिएका विजय चौधरीका बुबा जानकी चौधरीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रहरीमा छुट्टाछुट्टै जाहेरी दिएका छन् । दुवै परिवारले सद्गतका लागि शव बुझेका छन् ।
दाङ स्थाई घर भएका विजय चौधरी सामान्य किसान परिवारका व्यक्ति हुन् । राम्रो काम लगाईदिने भन्दै उनलाई एक जना चिनेजानको व्यक्तिले अर्जुनकुमारको घर ल्याएका थिए । उनी त्यस घरमा आउँदा सानै थिए । विजयको बुबा जानकारी चौधरी उनको शव बुझ्दासमेत यो घटना छोराले गराएको हो भनेर पत्याउन सकिरहेका थिएनन् । किनकी उनी मुना कार्कीको निर्मम हत्या गरेर नयाँ जस्तो देखिने नाईलनको डोरीमा झुण्डिएर आत्महत्या गरी प्राण त्यागिसकेका थिए । मुनाको प्राणपखेरु जान नसकेका कारण उनको शरीरमा न्यानो देखिएकोले नजिकैको स्टार अस्पताल लगीएतापनि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषित गरे । रगतको आहालमा डुबेकी उनको शरीरमा तातो भेटिएको भन्दै तन्नामा बेरेर स्टार अस्पताल लगिएको थियो । यो विभत्स दृश्यले सिंगो देशको ध्यान खिचेको छ । घटनास्थलबाट संकलन गरिएका विभिन्न प्रमाणहरुका आधारमा प्रहरीले मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
घटनास्थलबाट १५/ १६ टुक्रा भएको प्लाष्टिकको पिर्का, नयाँ देखिने नाईलनको डोरी, डोरी चुडिएको अवस्था विजयको शव, त्यहाँ भेटिएका सम्पूर्ण समाग्री प्रहरी अनुसन्धान टोलीले संकलन गरेको थियो । प्रहरीको लागि अनुसन्धानमा सबैभन्दा सहयोगी बन्यो सिसिटिभी । हो, केहि समय अगाडी घरमा चोरी भएका कारण छिमेकीको सुझाव शिरोपर गर्दै पूर्वसचिव कार्कीले घरमा सिसिटिभी जोडेका रहेछन् । सीसीटीभीमा रेकर्ड भएको भिडियो नियाल्दै जाँदा प्रहरीले फेला पार्छ महत्वपूर्ण क्ल्प्सि । अर्थात् बिहान १० बजेर ८ बजेको समयमा क्याप्चर भएको दृश्य ।
आत्महत्या गरेका भनिएका विजय चौधरी २२ वर्षिय विजय चौधरी यताउता गरिरहेका देखिन्छन् । पूर्वसभिव कार्कीकी श्रीमती मुना कार्की भान्छामा हुन्छिन् । अचानक विजयले प्लाष्टिकको पिर्का उनको टाउकोमा बजार्छन् । निरन्तर साङ्घातिक आक्रमण उत्रन्छन् चौधरी । मुनालाई भान्छाबाट घिसार्दै भुत्लाउँदै भुईमा टाउको समेत ठोक्काईदिन्छन् । पूर्वसचिव पत्नि कार्की पछाडी फर्किएको बेला ति चौधरीले डोरीले घाँटीमा कसेको दृश्य निकै दर्दनाक र अपत्यारीलो छ । उनले भुईमा पछारिएकी मुनालाई पिर्का प्रहार गर्छन् । कपालमा भुताल्दै भुइँमाबजार्ने क्रम जारी राख्छन् ।
अचानक कामदार आइलागेको देखेपछि मुना कार्की रुन चिच्याउन थाल्छिन् । तर उनको जोडबल चल्दैन । चौधरीको प्रहारबाट आलसतालस हुन्छिन् उनी । शरीरबाट रगत बाहिरीन थाल्छ । घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले मुचुल्का तयार पार्ने क्रममा समेत त्यो कुरा उल्लेख गरिएको थियो । सञ्चारमाध्यमलाई प्राप्त फोटोमा समेत उनी लडेको ठाउँमा रगतको आहल देखिन्छ । तर सिसिटिभीमा ति चौधरीले आफैँ आत्महत्या गरेको भने देखिएको छैन । फुटेजमा चौधरी निकै आक्रोशित भएर मारपिटमा उत्रिएको देखिन्छ । सानेपास्थित आफ्नै निवासमा सुखद जीवनयापन गरिरहेका पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीले यस्तो घटना देख्नुपर्ला भनेर कल्पना सम्म पनि गरेका थिएनन् ।
घटनास्थल नजिकै निवास भएकी र नातामा ज्वाई पर्ने पूर्वसचिव कार्की परिवारबीचमा कहिल्यै त्यस्तो नराम्रो घटना नभएको बताउँछिन्, सांसद कोमल वली । उनको एक सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भनेकी छिन् म र दाजु बाहिरबाट घर आएका थियौँ। खाना खान मात्रै लागेका थियौँ । अचानक लौन नि यो के भयो म बर्बाद भएँ । म सकिँए । भन्दै डाँको छोडेर रोएको पुरुषको आवाज आएपछि म र दाजु छतमा आएर कसलाई के भयो भनेर प्रतिप्रश्न गर्यौँ । उहाँ रुवाबासी गरेको देखेर हामी दौडदैँ उहाँको घरमा आयौँ । उहाँ पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फर्किनुभएकोले गलामा फूल र रुद्धाक्षको माला समेत थियो ।
आँगनमा लडिबुडि गरेको उहाँलाई देखेपछि हामी घटनास्थल प्रवेश गर्यौँ । भाँडाकुँडा यत्रतत्र छरिएका थिए । सामानहरु लथालिंग थिए । विभत्स दृश्य आँखै अगाडी थियो । घरमा काम गर्ने केटो नाईलनको जस्तो देखिने नयाँ डोरी माथि उ तल भुईमा लम्पसार थियो । मैले अतालिँदै आफ्नो घरबाट घटनास्थल आउँदा डिआईजीलाई फोन गरेर सबै कुरा भनेकी थिएँ । उहाँले तत्काल प्रहरी अधिकारीहरु घटनास्थल आईसक्ने जानकारी गराईसक्नुभएको थियो । आँगनमा ज्वाई पूर्वसचिव कार्की आलसतालस हालतमा हुनुहुन्थ्यो । पछि प्रहरी अधिकारीहरु आउनुभयो । प्रारम्भिक हेर्दा उहाँमाथि सांघातिक हमला गरेर आफूले पनि आत्महत्या गरेको जस्तो देखिन्छ । यद्यपी अनुसन्धानले सबै खुलाउँछ ।
कहाँ भएको थियो घटना ?
ललितपुर महानगरपालिका–२ स्थित सानेपा । पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको निवास यहिँ छ । साढे दुई तले घर छ, कार्कीको । उनकी छिमेकी हुन् राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वली । प्रहरी बिट सानेपाबाट नजिकै पर्छ उनको घर । करिब ५०० मिटरभित्र । घरमा एउटा कुकुर छ । चारैतिर पर्खालले घेरेर बलियो गेट छ यो घरमा । घरभित्र छिर्ने गेट नजिकै रहेको पोलमा दुवैतर्फ सीसीक्यामेरा समेत जडान गरिएको छ । यहि घरको लिभिङ रुम र किचनको बिचमा यो विभत्स घटना भएको थियो ।
पूर्वसचिव अर्जुन कार्की बिहान पूजा गर्न मन्दिर गएका थिए । अरु बेला खेलकुदमा सक्रिय हुने उनी त्यसदिन पशुपतिनाथ मन्दिर गएका थिए । उनका दुई छोरी बाहिर देशमा छन् । पढाईको सिलसिलामा। १२ वर्षिय छोरा स्कुल गएका थिए । ति बालकलाई पुर्याउन अर्की कामदार किशोरी पनि घरबाहिरै थिईन् । घर सफा गर्नका लागि राखिएकी उनी बिहान-बिहान कार्कीको घरमा पुग्थिन् । पूर्वसचिव कार्की चिया खाइसकेपछि बिहान प्रायः खेलकुदमा व्यस्त रहन्थे । कहिले ब्याडमिन्टन त कहिले गल्फ । तर, हुने हार दैव नटार भनेझैँ उनलाई पूजा गर्न मन लागेर चालकसँग गाडी निकाल्न अनुरोध गरे ।
ड्राइभरलाई लिएर उनी पशुपति मन्दिर गए । दर्शन गरे र फर्के । तर घर आएर निकै बेर गेटमा घण्टी दिए । गेट खुलेन । उनी आफैँ गएर गेट खोले । भित्र जान्छन्, घरमा काम गर्ने केटो झुण्डिएको जस्ते देखिन्छ । डोरी चुँडिएको छ । शव भुईमा पसारो परेको छ । उनी श्रीमतीलाई गुहार्छन् । श्रीमतीलाई पनि चालचुल छैन । उनी पनि निमर्म प्रहारपछि लमतन्न छिन् । यो देखेर उनको होसहवास उड्छ । उनी आक्रान्त बन्छन् । चिच्चाउँदै बाहिर आउँछन् उनको यो हालत देखेर छिमेकी आत्तिदै आउँदा यो कुरा थाहा पाउँछन् । प्रहरीलाई खबर पुग्छ । प्रहरी घटनास्थल पुग्छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट टेक्निकल टिम घटनास्थल पुगेर सुक्ष्म अनुसन्धान सुरु गर्छन् ।
गाडीमा बिहान ७ बजे घरबाट निस्केका अर्जुन कार्की करिब ८ बजेतिर मन्दिर पुगेका थिए । २ घण्टा लामो लाइन बसेर उनले मन्दिरमा पूजा गरे । पूजाआजा सकेर घर फर्किँदा करिब साढे १० बजेको थियो । उनि घर आइपुगेको समयमा यी घटना भइसकेका हुन्छन् ।
चौधरीको फेरिएको व्यवहार‘ !
केहि दिनदेखि चौधरी केहि सोचेजस्तै देखिन्थे । घोत्लिन्थे । तर उनलाई खासै नगरेको परिवार बताउँछ । सहयोगी चौधरीले सधैँ बिहान–बिहान कार्कीलाई मात्र चिया बनाएर दिन्थे । तर, सोमबार बिहान चौधरीले घर सफा गर्ने महिलादेखि कार्कीकी श्रीमती, छोरा र चालकलाई समेत चिया बनाएर खुवाएका थिए ।
घटनापछि सांसद कोमल वलीले एक अनलाईन सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै केहि अगाडी यो घरमा चोरीसमेत भएको थियो । उक्त चोरीको घटनामा कतै तिनै मृतक विजयको त हात थिएन भन्दै आशंका व्यक्त गरेकी छिन् । यद्यपी यो छानबिनको विषय भएकोले प्रहरीलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी छिन् । विजयलाई त्यस दिन बिहान एक छिमेकीले बजारमा हिँडिरहेको पनि देखेका रहेछन् ।
कार्कीकी श्रीमती मुना कार्की रगतले लतपतिएको अवस्थामा फेला परेकी महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी टेकप्रसाद राईले बताए । घटनास्थलमा ‘कार्कीको घरमा काम गर्ने चौधरी मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।’ ‘मुनाको टाउकोमा पिर्काले प्रहार गरेको र घाँटीमा चोट लागेको देखिएको जनाएको प्रहरीले सिसिटिभी फूटेज हेरेर घटनाबारे अनुसन्धान गरेपछि चौधरीले नै घटना गराएको पत्तो लगाएको हो । घटनाको करिब एक घण्टापछि प्रहरीले परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मी बोलाउँदा मुनाको शरीर तातै रहेको फेला परेपछि उनलाई तत्कालै स्टार अस्पताल पठाएको थियो । तर, अस्पतालले पनि कार्कीलाई मृत घोषणा गर्यो ।
कार्कीकी श्रीमतीको हत्या गरेर सहयोगी विजय चौधरीले नाइलनको डोरीले कसेर आत्महत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । तर हत्यापछि आत्महत्या नै गर्नुपर्ने दुईबीच के रिसिइबी थियो भन्ने खुलिसकेको छैन । त्यसैमाथि सिसिटिभी केलाईरहेको प्रहरीले चौधरीले आत्महत्या गरेको फुटेज भने फेला पारेको छैन ।
‘घटनास्थलमा प्लास्टिकको पिर्का पनि टुक्रा-टुक्रा भएको अवस्थामा फेला परेको छ । चौधरी झुण्डिएको डोरीसमेत चुँडिएको थियो । उनी मृत नै भेटिएका थिए । घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धानको लागि अनुसन्धान अधिकारीहरूले पूर्वसचिव अर्जुनको घरमा रहेको सीसीटीभी क्यामराको फुटेज र घटनास्थलबाट संकलित सबै सामाग्रीको गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
श्रीमतीको विभत्स मृत्युको वियोगमा रहेका पूर्वसचिव कार्कीले भावविह्वल हुँदै आफ्नो १२ वर्षिय छोरा घरमा भएको भए छोरा पनि मर्ने रहेछ भन्दै मिडियासँग भक्कानिएका थिए ।
उनको टाउको कुर्सीले प्रहार गरेको र घाँटीमा चोट लागेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । शुरुमा छिमेकीले कार्कीको हत्या भएको जानकारी दिए पनि घटनाको करिब एक घण्टापछि प्रहरीले परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मी बोलाउँदा कार्कीको शरीर तातै रहेको फेला परेपछि उनलाई तत्कालै अस्पताल पठाएको थियो । तर अस्पतालले मृत घोषित गरिदियो ।
पूर्व सचिव कार्की यसअघि भूकम्पपीडितका लागि खरिद गरिएको भनिएको त्रिपाल र जस्तापाता काण्डमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिनमा परेका, २०७३ सालमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले भौतिक कारवाही समेत गरेको, सानेपामा उनीमाथि आक्रमण भएको तथा उनी सवार गाडीमा क्षति पुगेको थियो । प्रहरी अधिकृतले हत्या योजनाबद्ध रुपमा थियो भन्ने अनुमान गरेका छन् ।
घटनास्थलबाट प्रहरीले भाँचिएको अवस्थामा प्लाष्टिकको पिर्कासमेत बरामद गरेको छ।
हत्याको कारण भने खुल्न सकेको छैन। सिसिटिभी फुटेजमा केही समय दुईपक्षबीच लडाई भएको समेत देखिन्छ ।
अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी भन्छन्, नजिकै रहेको धारामा टाउको ठोकिएको पनि हुनसक्छ, रगत लत्पतिएको थियो । अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रहरीले हत्याको कारण खोज्दै विभिन्न व्यक्तिसँग वयान लिने क्रम जारी राखेको छ ।
स्रोतका अनुसार झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका चौधरीको पाईन्टमा विर्य फेला परेकोले बलात्कार भएको हो कि वा प्रयास भएको थियो कि भन्ने एंगलबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यस्तै मृतक मुनाको देब्रे स्तनमा टोकेको जस्तो आकृति देखिएको भन्दै उनीमाथि बलात्कार भएको भनिएको छ ।
तर प्रहरी अधिकारीले कुराकानीको क्रममा भनेका छन्, प्रतिकारको क्रममा त्यस्तो भएको उनी बताउँछन् । उनको मृत शरीर पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल लगिएको थियो । पोष्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिसकेकाले चिकित्सकको रिपोर्टले नै जबरजस्ती करणीको भएको हो वा होइन भन्ने निश्चित गर्नेछ । यहीको रिपोर्ट आएपछि मात्रै अरु तथ्य खुल्नेछ ।